Nyanzvi Dzinoti Mutemo Wekuchengetedza Vanhu Kubva Kuutachiona Hwe HIV Hausi Kushanda
Chikumi 27, 2011
Mutori wenhau uyu anoshandira mu Bulawayo, Simiso Mlevu, akabuda mumapepanhau achipomera mumiriri we Insiza South mudare reparamende, Va Siyabonga Malandu-Ncube, mhosva yekumupa hutachiwana hwe HIV, apo vaviri ava vaiita zveponde
svondo rapera mumwe mutori wenhau akabuda pachena achiti akange atapurirwa utachiona hwe HIV nemumwe murume anove nhengo yedare reparamende.
Nyaya iyi yakakonzeresa kutaura kukuru pamusoro pezvinoitika pavanhu vaviri munguva dzavanenge vachidanana, nezvinozoitika apo vanenge varambana.
Mutori wenhau uyu anoshandira mu Bulawayo, Simiso Mlevu, akabuda mumapepanhau achipomera mumiriri we Insiza South mudare reparamende, Va Siyabonga Malandu-Ncube, mhosva yekumupa hutachiwana hwe HIV, apo vaviri ava vaiita zveponde.
Simiso anoti VaMalandu-Ncube vakaita kuti ave nehutachiona, sezvo vakange vasingazvidziviriri, ivo vachiziva kuti vaive ne HIV.
Izvi ndizvo zvakapa kuti Simiso asungise VaMalandu-Ncube.
Nyaya iyi iri kumatare umo Va Malandu-Ncube vari kuramba mhosva iyi vachiti kunyange hazvo vakadanana na Simiso, uyo anoshanda kubepanhau re B-Metro ku Bulawayo, havana kumutapurira utachiona vachiti ivo vakachena.
Nyaya iyi yaita kuti vanhu vape pfungwa dzavo pamatare mbozha akaita se Facebook ne Twitter, vamwewo vachitaura nezvayo kumabasa, mumabhazi nekuma bhawa.
Nyaya Ina Sandra Nyaira